Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Ee Ay Qoreen Wargeysyada Yurub Maanta Oo Talaado Ah | Laacib.net
Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Ee Ay Qoreen Wargeysyada Yurub Maanta Oo Talaado Ah
Goolhayaha Atletico Madrid Jan Oblak ayaa doonaya inuu xagaagan ka tago Atletico Madrid, waxaana 26 jirkaan uu doonayaa inuu ku biiro Manchester United marka loo eego PSG. (ESPN)
Chelsea ayaa filaneysa in tababare Maurizio Sarri loo magacaabi doono tababaraha Juventus 48da saacadood ee soo socota, iyadoo kooxda Stamford Bridge ka dhisan ay qoratay liiska tababarayaasha u bedeli lahaa: Frank Lampard, Maxi Allegri, Steve Holland, Erik ten Hag, Nuno Espirito Santo iyo Javi Garcia. (Daily Express)
Manchester United ayaa u sheegtay Real Madrid in xiddiga khadka dhexe Paul Pogba inuusan iib aheyn, waxaana ay diideen inay qiimo duldhigaan 26 jirka Faransiiska. (AS)
Juventus ayaa xiiseyneysa inay dib u la soo saxiixato Pogba, laakiin kooxda heysata horyaalka Serie A ayaa u baahan inay iibiso shan ciyaartit si ay u awoodaan qiimaha xiddiga khadka dhexe. (Daily Mail)
Ka dib markii Manchester United laga soo diiday dalabkii ugu horeeyay ee ay ka gudbiyeen daafaca Crystal Palace Aaron Wan-Bissaka waxay haatan la laabanayaan dalab 50 milyan ginni. (Daily Mirror)
Man United ayaa dib u soo nooleyneysa xiisaheeds daafaca garabka ka ciyaara ee Tottenham Danny Rose kaasoo 26 sanno jir ah ka dib markii uu xiddiga Ingariiska qirtay inuu ka tagi karo Spurs xagaagan. ( Manchester Evening News)
Tottenham ayaa dooneysa daafaca garabka midig ee Japan iyo kooxda Marseille Hiroki Sakai oo 29 sanno jir ah. ( Sky Sports)
Arsenal ayaa dalab gaaraya 43 milyan ginni oo ka gudbisay daafaca dhexe ee Denmark 23 jirka Joachim Andersen iyo xiddiga khadka dhexe ee Belgium 25 jirka Dennis Praet waxaa soo diiday kooxda Talyaaniga ee Sampdoria kuwaasoo labada xiddig ku doonaya 49 milyan ginni. ( Gazzette dello Sport)
Liverpool ayaa meesha ka saartay inay la soo wareegeyso weeraryahanja 31 jirka kooxda Werder Bremen Max Kruse. ( Liverpool Echo)
Barcelona ayaa sameyneysa isku daygii ugu danbeeyay ee ay kula soo wareegayaan daaafaca 19 jirka Matthijs de Ligt isbuucaan iyagoo la kulmaya wakiilkiisa Mino Raiolal ( ESPN)
Paris Saint-Germain ayaa iyagana kalsooni buuxda ku qaba inay heshiis ka gaari doonaan saxiixa De Ligt, madaama wakiilkiisa Mino Raiola uu saaxiib la yahay agaasimaha PSG Leonardo. (Daily Mail)
Xiddiga diirada u saaran Manchester City iyo Bayern Munich 22 jirka Rodri ayaa go’aan ku gaaray inuu isaga tago Atletico Madrid kuwaasoo sheegay inay barbareyn doonaan dalab kasta uu xiddiga reer Spain ka helo koox kale. (AS)
Xiddiga khadka dhexe ee Ajax Donny van de Beek oo 22 jir ah ayaa doonaya inuu u wareego Premier League isagoo jeclaan lahaa inuu ku biiro midkood Tottenham ama Manchesterr United xagaagan. (talkSPORT)
Kooxda Valencia ayaa xiiseyneysa xiddiga Isbaanishka ee weerarka uga ciyaara Newcastle 25 jirka Ayoze Perez. ( Cope)
Chelsea ayaa ka labalabeyneysa inay heshiis joogta ah kula wareegto xiddiga ay amaahda uga heysteen Real Madrid 25 jirka khadka djexe Mateo Kovacic. (Evening Standard)
Tababaraha xulka France Didier Deschamos ayaa shir jaraa’id ku xaqiijiyay in Ferland Mendy oo daafac uga ciyaara kooxda Lyon inuu xagaagan ku biirayo Real Madrid. (Marca)
Daafaca midig ee xulka Portugal Nelson Semedo ayaa ka tagaya Barcelona xagaagan, waxaana 25 jirkaan xiiseyneysa kooxda Atletico Madrid, laakiin kooxda Catalans ayaa ku dooneysa 45 ilaa 50 milhan euro. ( Marca)